Ka-hortagga dulmiga - Gargaarka Musiibada ee Gargaarka Wadaagga ah
Bogga ugu weyn/Ka hortagga dulmiga
Ka hortagga dulmiga2021-04-01T16:40:24-04:00
Waxqabadka Wadaniga ah
Caqabado maaha xulafada: baabi'inta Dhismaha Warshadaha Isbahaysiga
Daandaansigan ayaa loogu talagalay in lagu soo dhexgalo qaar ka mid ah xiisadaha taagan ee ku xeeran midnimada / taageerada shaqada maaddaama waddooyinka hadda socda ay yihiin kuwo ka soo horjeedka xorriyadda aragtidayda.
Shabakada Waxqabadka Tooska ah ee Los Angeles
Qalabka Abaabulka ee Diidmada Cadaadiska
Mabaadi'da La-Dagaalanka Cabudhinta: Awoodda iyo mudnaanta ayaa ka dhex muuqda firfircoonida kooxdeena waana inaan si joogto ah ula halganno sida aan ugu babacdhigno awoodda iyo mudnaanta ku dhaqankayaga.
Isbedel Caalami ah
Akhristaha Kahortagga Cadaadiska
Shaqada ladagaalanka dulmiga waxay kakoobantahay yoolal sida kaqeyb qaadashada dhisida dhaq dhaqaaqyada bulsheed ee kaladuwan, abuurida meel amaan ah dhamaan codadka in laqoro lana qiimeeyo, iyo u suura galinta dhamaan kaqeybgaleyaasha inay kordhiyaan waxtarkooda cadaalada bulshada iyadoo loo marayo geedi socodka waxbarashada wadajirka ah.
Caqabadaha Hanti-wadaagga & Aabbeynta
Waxaad waxbadan ka qortay arimaha dumarka iyo midabkaba
dulmiga ka jira Mareykanka, falanqayntaada had iyo jeer waa mid feker leh oo xasaasi ah laakiin, marka la eego in aqoonyahan loo ahaado dareenka eray ee erayga, miyay dhib kugu tahay in tirada badan ee haweenka iyo haweenka Afrikaanka ah ee Mareykanka laga yaabo, inayna fursad u helin ogow cidda jalaska dawanaysa waa; waxaa laga yaabaa inaysan aqrinin maaddadaada oo wax badan ka oranaysa halganka ay ku jiraan?
Waxaan ku nool nahay waddanka adduunka ugu taajirsan, laakiin boqolkiiba inta ugu badan ee hantidaas waxay ku jirtaa gacanta boqolkiiba in yar oo dadka ka mid ah. Deegaan ahaan iyo farsamo ahaanba waa macquul in qof walba uu ku raaxeysto nolol wanaagsan haddii hantida dib loo qeybiyo, ka faa'iideysiga la joojiyo oo tartanka hubka laga tago.
Macnaha guud ee Katrina: Kheyraadka Taariikhda iyo Dhaqanka New Orleans ee loogu talagalay booqashada dadka u dhaqdhaqaaqa iyo ka hortagga cunsuriyada ilaha dhaqdhaqaaqayaasha caddaanka
Maanta, koritaanka joogtada ah ee dalxiiska - in kasta oo ay jiraan warbixino sheegaya heerka dambiyada sare ee magaalada - waxay ka dhigeysaa qayb sii kordheysa ee fursadaha shaqo ee New Orleans. Sida magaalooyin badan oo Mareykan ah dhammaadkii millennium-ka, New Orleans waxay ka faa'iideysteen isbeddellada ku aaddan soo nooleynta magaalooyinka, dambiyadiina hoos ayey u dhaceen sannadihii la soo dhaafay.
Tilmaamaha Ahaanshaha Isbahaysi Caddaan Adag
Maxay xulafadu qabataa? In lala saaxiibo dadka midabka leh halganka lagu joojinayo cunsuriyada waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee dadka cadaanka ah ay sameyn karaan.
Sanduuqa Qalabka Bulshada
Bogsiinta Saamaynta Dulmiga Gudaha
Daraasad dhowaan la sameeyay ayaa lagu ogaaday in ardayda Madawga ah ee la waydiiyay inay isku aqoonsadaan jinsiyadooda markay qaadayaan imtixaanka caadiga ah ay si joogto ah uga hooseeyaan ardayda kale ee Madowga ah ee aan la waydiin inay cadeeyaan jinsiyadooda.
Ka Gudubka Takoorka
Fikradaha Qarsoon iyo Dabeecadaha: 1. Qiyaasta in kooxda xukunka haysaa ay meteleyso bani-aadamka guud ahaan: tusaale ahaan, in "nin" loola jeedo dadka oo dhan, in qalabka bandhiga casaanka ah ay yihiin midab midab leh.
Qaababka Awoodda Wadajir ee Guud Ahaan Loogu Kuur Galay Dhaqdhaqaaqa Cadaalada Bulshada
Ragga ka hadlaya dumarka - Faallooyinka ragga ee lagu qiimeeyo ra'yiga dumarka - Ragga aan la wadaagin macluumaadka dumarka - Ragga ugu horreyntii waxaa loo soo bandhigaa fikradaha, macluumaadka, jihada, oggolaanshaha, iwm - Ragga oo qaata iyo qaadashada amaahda fikradaha ay markii hore dumarka soo bandhigeen - Ragga sameynta qayb aan u qalmin shaqada dadweynaha
Sharon Martinas iyo Rachel E. Luft
Dhanka Dib u Soo Celinta Cadaaladda ee New Orleans: Akhriska ku saabsan Cunsuriyada iyo iska caabinta Katrina kahor, Inta lagu guda jiro, iyo kadib
Weli waxaa jiray biyo taagan 6 ft oo qoto dheer guryaha dadka laba toddobaad daad ka dib.
Toban Waxyaabood oo Xusuus mudan: Xeeladaha ka hortagga xagjirnimada ee xagjirka Ardayda Caddaanka ah
Sanado badan ka dib sidii arday cadaan ah oo xagjir ka ahaa dugsiga sare ka dibna kuleej, waxaan dib uga fiirsanayaa khibradeyda. Waxaan sameeyay qaladaad badan oo indho la’aan siyaabo badan, gaar ahaan qof cad.
INCITE !: Haweenka Midabkoodu Ka Soo Horjeedo Rabshadaha
Kacaanku Wuxuu Ka Bilowdaa Guriga Isaga Hor Imaada Rabshadaha Qarsoon Ee Ka Dhexeeya Bulshooyinka Dhaqdhaqaaqa
Ma soo jeedinayo in rabshadaha galmada iyo rabshadaha qoyska aysan sii jiri doonin. Waxaan soo jeedinayaa in aan abuurno adduun ay dad badani ku dhex wareegayaan iyaga oo wata xirfado iyo aqoon si ay u taageeraan qof in aan loo baahnayn khadadka taleefanka ee aan la aqoon.
Isbahaysiga Kheyraadka iyo Tababarka ee La Dagaalanka Cadaadiska
Tilmaamaha Magacaabista, Dhexgalka, iyo Wax ka qabashada Awoodda Nidaamka
Ka Dhaqaaqo Difaaca & Dambiga, Ujeedka Ficilka: Waxaan ogaanayaa oo aan iska daayaa dareennada faragelinaya awooddeyda dhageysiga waxa aad sheegayso
Qalabka loogu talagalay Guys White oo ka shaqeynaya Isbedelka Bulshada
Ku celceli inaad ogaato qofka qolka ku jira kulamada - meeqa rag ah, meeqa haween ah, imisa qof oo cadaan ah, imisa qof oo midab leh, ma aqlabiyad baa ku haysata jinsiyadaha kala duwan, mawaxaa jira dad safaf ah, maxay yihiin asalka dadka fasalkooda. Ha u maleynin inaad taqaanid dadka, laakiin sidoo kale ka shaqee inaad ka warqabto.
Dhanka aragtida ku saabsan cunsuriyadda aan la baran
Sababtoo ah cunsuriyaddu waa mid hay'adeed iyo mid ku habboon, xeelado wax ku ool ah oo ka dhan ah waa inay aqoonsadaan dabeecaddan laba-geesoodka ah. Tirtirida midab takoorka haykalka ah waa inay la socotaa barashada dabeecadaha cunsuriyada iyo aaminsanaanta.
Sababta Guud ee Ottawa
Oo ay la socdaan xulafada sidan oo kale ah: Milicsiga Dhimista Khaaska ah
Intii lagu gudajiray dhowrkii sano ee la soo dhaafay, siyaasad ka soo horjeedka cadaadiska ayaa u kacday meel saameyn weyn ku leh khudbadaha dhaqdhaqaaqa ee Waqooyiga Ameerika. Aqoon isweydaarsiyo kahortaga dulmiga iyo kooxaha akhriska, mudnaanta iyo liistada hubinta iyo tilmaamaha, iyo buugaag aan la tirin karin, baloogyada internetka iyo maqaallada ayaa si joogto ah uga dhex muuqda abaabulidda iyo falanqaynta fowdada. Ku raaxeysiga mowqif hegemonic wada hadal Bidix, siyaasad ka soo horjeedka cadaadiska ayaa u yimid inay qabsadaan booska shey muqaddas ah - wax muujinaya oo xoojinaya qiyam gaar ah, laakiin aan si fudud isugu dhiibin milicsiga muhiimka ah.
Waa kuma Oakland? Dhaqdhaqaaqa La-dagaallanka Cabudhinta, Siyaasadda Badbaadada, iyo Wada-Xirnaanta Gobolka
Buug-yarahan - oo ay si wada jir ah u qoreen koox dad midab leh, haween ah, iyo rag saf wadayaal ah - waxaa lagu bixiyaa midnimo qoto dheer iyo ruuxi wada hadal lala yeelanayo cid kasta oo u heellan sidii loo soo afjari lahaa dulmiga iyo dhiig-miirashada. Waa naqdin ku saabsan sida aragtida mudnaanta iyo muhimadda dhaqanku u curyaamisay antiracist, dheddigga, iyo abaabulka queer ee dalkan iyada oo lagu jahwareerinayo qaybaha aqoonsiga iyo midnimo
Mucaaradka xuduudaha haweenka
Maxay Sababta Misogynistyadu U Sameeyaan Xog-Ogayaal Wanaagsan: Sida Rabshadaha Jinsiga ee Bidix ugu suurta geliyaan Rabshadaha Gobolka ee Dhaqdhaqaaqa Xagjirnimada
Zine-kan ayaa eegaya sida aan loo xakamayn misogyny ee dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed, kooxaha, wax kasta oo aad rabto inaad ugu yeerto waxay abuureysaa jawi u bisil qorista iyo dejinta dadka xog-ogaalka ah. Dabeecadaha xunxun ayaa ah kuwo carqaladeeya isla markaana haweenka iyo dadka daba dhilifka ah ka riixa meelaha banaan, iyagoo had iyo jeer xukuma ajandaha.